Le yimveliso yethu entsha enoyilo lwenguqulo entsha. Ingxowa yenziwe ngeplastikhi eninzi. Uluhlu lwangaphandle (i-polyamide + polyethylene) lukhusela kwioksijini kunye nokufuma; Ubuninzi bayo kunye nokwakheka kwayo kungahluka ngokuxhomekeke kwiimfuno zomthengi okanye imveliso. Uluhlu lwangaphakathi (i-polyethylene) lolastiki ...